Ciidamada AMISOM oo dad shacab ah ku xasuuqay magaalada Marka |
Ciidamada AMISOM oo dad shacab ah ku xasuuqay magaalada Marka
Wararka ka imaanaya Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in Ciidamo katirsan AMISOM ay saakay dad badan oo shacab ah ku laayeen xaafado katirsan Magaalada Marka .
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in Ciidamada AMISOM qarax lagu weeraray, waxaana qaraxa kadib ay Ciidamada AMISOM ay fureen rasaas badan, waxa ayna Ciidamada gudaha u galeen xaafdao katirsan Magaalada Marka halkaasi ay siyaabo kala duwan ugu laayeen dad shacab ah oo Dhalinyaro u badnaa.
Ku dhawaad 10-qof ayaa lagu soo waramayaa in Ciidamada AMISOM ay siyaabo kala duwan saakay ugu dileen Magaalada Marka, waxaana dadka ay Ciidamada MAISOM dileen ku jira macalimiin dugsi quraan ku hayay Magaaladaasi.
Xaalada Magaalada Marka ayaa ah mid aad u kacsan, waxaana meelaha qaar yaala meydadka dadka ay dileen Ciidamada AMISOM , waxaa sidoo kale jira dad shacab ah oo ku dhaawacmay rasaasta ay fureen Ciidamada AMISOM oo Isbitaalka la dhigay.
Dowlada Soomaaliya iyo taliska AMISOM ayaan wali ka hadlin dadka ay Maanya Ciidamada katirsan AMISOM ku laayeen Magaalada Marka ,Ciidamada AMISOM ayaa sidan oo kale marar kala duwan waxa ay dad badan oo shacab ah ugu laayeen Magaalada Marka.